၂၀၁၈တွင် သင့်ကိုချမ်းသာစေမည့် အရောင်းအဝယ်နည်းသည့်ငွေကြေးများ
ဒီမှာ အခြေအနေများပါ: အနာဂတ်ကိုမြင်ရန် စွမ်းအားရခဲ့သည်၊ $၁၀၀၀မြှုပ်နှံခဲ့ပြီး၊ leverage ၁:၁၀၀ သုံးခဲ့သည်။ USDနှင့်တွဲသည့် အရောင်းအဝယ်နည်းသော ဘယ်ငွေကြေးက အကြီးဆုံးအမြတ်ကို ယူဆောင်ပေးမှာလဲ?
အမှတ်ရပါ၊ တွက်ချက်မှုအားလုံးတွင် SWAP ပါသည်။ SWAPသည် တစ်ညတာအရောင်းအဝယ်ကိုင်ထားခြင်းအတွက် ပေးရသည့်အခဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်ရောင်းဝယ်နေသည့် နိုင်ငံများရှိ ဗဟိုဘဏ်များ၏ အတိုးနှုန်းအခြေခံအတိုင်း ဖွဲ့သည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အခြေခံအားဖြင့်၊ သင်သည် အရောင်းအဝယ်အား တစ်နေ့ထက်ပိုပြီးဖွင့်ထားရန်လိုအပ်သည့်၊ ရေရှည်အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာသင်၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအမြတ်မှ ထုတ်ယူထားသည့် သေချာသောရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
ဤအရောင်းအဝယ်နည်းသော ငွေကြေးများသည် USDနှင့် အလွန်အားကောင်းသော ချိတ်ဆက်မှုရှိသည့်အတွက်၊ ယင်းတို့၃ခုလုံး ကျဆင်းရန် အကြောင်းပြချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းအမြင့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ အားကောင်းသွားသည် - အရောင်းအဝယ်နည်းသောငွေကြေးများသည် ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။
တောင်အာဖရိကမှာ မြေနှင့် လယ်ယာသိမ်းယူမှုနှင့် အမေရိကန်အစိုးရ ငွေချေးစာချုပ်ထွက်ရှိမှု သိသာသောမြင့်တက်မှုသည် တောင်အာဖရိကအပြင်ဘက်အပေါ် နိုင်ငံတကာအရင်းအနှီးကို မောင်းပို့မှုနှင့် ZARကို အပြင်းအထန်ကျဆင်းစေသည့်အပေါ် ဆွေးနွေးပွဲ။ တောင်အာဖရိက စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြီး ကြီးမားလာသောအန္တရာယ်သည်လည်း ZARအပေါ် ကြီးမားသည့်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။
အဝယ်အတွက် အော်ဒါကို ဇန်နဝါရီ ၂တွင် ဖွင့်ခဲ့ပြီး၊ စက်တင်ဘာ ၅တွင် ပိတ်ခဲ့သည်
သင်ရခဲ့သည့်ဝင်ငွေ: $၁၅ ၇၀၂
သြဂုတ်လတွင် BRLသည် မတ်လ ၂၀၁၆ပြီးထဲက ပထမဆုံးအကြိမ် သေရေးရှင်ရေးအားနည်းခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ သမ္မတဟောင်း Luiz Inacio Lula da Silva ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှုရှိသော်လည်း၊ သူသည် ပြိုင်ဘက်များကိုဆန့်ကျင်ပြီး အကျိုးအမြတ်ကြီးရခဲ့သည် - အကျဉ်းထောင်ကနေ။ ၎င်းသည် မြှုပ်နှံသူများကို နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးအပေါ် အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေခဲ့သည်။ စီးပွားရေးကျဆင်းလာမှုသည် BRLကိုလည်း အကူညီမဖြစ်စေခဲ့ပါ။
အဝယ်အတွက် အော်ဒါကို ဇန်နဝါရီ ၂တွင် ဖွင့်ခဲ့ပြီး၊ သြဂုတ်လ ၃၀တွင် ပိတ်ခဲ့သည်
သင်ရခဲ့သည့်ဝင်ငွေ: $၁၈ ၇၇၇
၂၀၁၈၏ အများဆုံးသိသာသည့် ကျဆင်းမှုများထဲမှတစ်ခုမှာ TRYဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဒေါ်နယ်ထရမ့်မှ တူရကီအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုအသစ်များနှင့် သံမဏိနှင့် အလူမီနီယံတင်ပို့မှုအပေါ် အခွန်နှစ်ဆကောက်ခံမှု ကြေညာပြီးနောက် အစွန်းကိုကျော်ပြီး တွန်းပို့ခံခဲ့ရသည်။ တူရကီသည် အနုတ်သဘောဆောင်ပြီးသားဖြစ်သော စီးပွားရေးအညွှန်းကိန်းများနှင့်အတူ ပိတ်ဆို့မှုများရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
အဝယ်အတွက် အော်ဒါကို ဇန်နဝါရီ ၂တွင် ဖွင့်ခဲ့ပြီး၊ သြဂုတ်လ ၈တွင် ပိတ်ခဲ့သည်
သင်ရခဲ့သည့်ဝင်ငွေ: $၃၇ ၃၆၇
အရောင်းအဝယ်နည်းသောငွေကြေးများသည် ဈေးလှုပ်ခတ်မှုအလွန်ကြမ်းသောကြောင့် လူသိများကြသည် - ဒါဟာ သင်အမြတ်ရရန် အခွင့်အရေးကြီးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယခုနှစ်မှာ ဒါကိုသုံးပြီး၊ Forex အရောင်းအဝယ်၏ နယ်ပယ်သစ်ကို ဖွင့်ပါ!
အရောင်းအဝယ်နည်းသော အတွဲများကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ